Sat, Jul 11, 2020 at 1:17pm
काठमाडौं, २७ साउन । नेपाल पर्यटन बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट यसै साता ल्याउने भएकाे छ । बोर्ड व्यवस्थापनले तयार पारेको बजेट यसै साता संचालक समितिमा प्रस्तुत हुने भएकाे हाे । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले यस वर्ष प्रवर्द्धनमा नयाँ नयाँ बजारसम्म पुग्ने लक्ष्य रहेकाे बताए । उनले भने, ‘मुख्य प्राथमिकता भ्रमण वर्षको तयारी नै हुनेछ ।’ आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १ अर्ब ७५..
काठमाडाैं, २७ साउन । तपाईंले सरकारलाई महत्वपूर्ण सूचना दिएर १० लाख सम्म जित्न सक्नु हुन्छ । सरकारलाई सूचना दिए वापत तपाईंले १० लाख रुपैयाँसम्म पुरस्कार पाउन सक्नुहुन्छ । कुनैपनि वस्तु चोरी-पैठारी भएको देख्नु भएकाे अथवा थाहा पाउनु भएकाे छ भने तपाईंले साे सूचना सरकारलाई दिएर १० लाखसम्म पाउन सक्नुहुन्छ । यस्ता खालका सूचनामा सरकारले १० लाखसम्म पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ । सबै खाले सूचनामा भने १० लाख पाइदैन । पुरस्कार रकम..
सुन किन्ने भन्दा बेच्ने बढे ! व्यवसायी टाउको समात्दै !!
चिप्लेढुङगा, २६ साउन । नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढे संगै सर्वसाधारणहरु सुन किन्नभन्दा बेच्न लागेका छन् । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सुनको भाउ बढेपछि नेपाली बजारमा सुन किन्ने भन्दा बेच्नेको भिड बढ्न थालेको हो । चाडपर्वको मौसममा ग्राहक कुरिरहेका सुन व्यापारी यतिबेला सुन किन्न भन्दा बेच्न आएका ग्राहकहरुबाट हैरान छन् । मूल्य बढेको मौकालाई अवसरका रुपमा लिनेले आफू संग भएको सुन बेच्ने गरेका..
भद्रपुर, २६ साउन व्यापारिक नाकाको रूपमा परिचित झापाको मेचीनगर केही वर्षयता औद्योगिक नगरको रूपमा विकसित हुन थालेको छ । यातायात र बैंकिङ सुविधा, कच्चा पदार्थको आयातको सहजता र सुरक्षित लगानीको वातावरणले मेचीनगरको ज्यामिरगढी र दुहागढी क्षेत्रमा करोडौं लगानीका नयाँ उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । उद्योगहरू स्थापना भएसँगै स्थानीयले रोजगारी पाउने क्रम र व्यापारिक चहलपहल बढेको छ । मेचीनगर वडा नं. १३ दुहागढीमा..
काठमाडौं, २५ साउन। एक महिनादेखि लगातार बढेर सुनकाे मूल्य प्रतिताेला ७० हजार पुगेकाे छ । यसरी सुनके मूलय लगातार आकासिएपछि सुन बिक्रि ठप्प नै भएकाे छ । अहिले दिनमा एक किलो पनि सुन विक्री नहुने नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएकाे छ । महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिकरत्न शाक्य सुनको कारोबार ठप्प जस्तै रहेको बताउँछन् । यसअघि सुन चाँदी व्यवसायीहले बैंकबाट दैनिक २० केजीसम्म सुन उठाउँथे ।..
काठमाडौँ, २५ साउन । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूको ऋण लगानीमा १६ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तोकेसँगै यसलाई वृद्धि गर्न सहकारीकर्मीहरूले लविङ सुरु गरेका छन् । विभागले तोकेको सीमाभित्र बसेर काम गर्न नसकिने भन्दै कम्तिमा पनि लघुवित्त संस्थाको सरह बनाउन माग गरेका हुन् । सहकारी विभागले आइतबारदेखि देशभरका सहकारीका लागि ऋणको ब्याजदरमा सीमा लागू गरेको थियो । यो सीमाभित्र बसेर सहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरू..
काठमाडौँ, २५ साउन । सरकारले सबै एनजीओ/आईएनजीओको अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गैससका नाममा रहेका जग्गाजमिन, भवन तथा सवारी साधन बिक्रीमा रोक लगाएका हुन् । भक्तपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले गृहको परिपत्रपछि गैरसरकारी संस्थाका नाममा भएका अचल सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाइसकिएको बताए । धनुषाका प्रजिअ प्रदीपराज कणेलले पनि नापी र मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएर..
काठमाडौं, २४ साउन विकाससोन्मुख देशहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै सुधार भैरहेको देशको सूचीमा नेपाल पहिलो बनेको छ भने प्रगतिका बिभिन्न सूचकहरुमा विश्वभरमा 'बटम अप' बाट मात्र नाम खोज्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा हालै भएको एक सर्वेक्षणले भने नेपाललाई पहिलो बनाएको छ । बिरलै आउने यस्ता समाचार समग्र नेपाली अर्थतन्त्रका लागि खुशीको खबर हो । यूरोमनिडटकमले हालै बिभिन्न १ सय ८६ देशहरुमा गरेको एक सर्वेक्षणका अनुसार सन्..
काठमाडौँ, २३ साउन सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि ल्याइएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ संशोधनको तयारी गरेको छ । कार्यविधिअनुसार युवालाई कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भएकाले संशोधनको तयारी गरेको हो । राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपाल र रिटर्नी माइग्रेट नेपालले आज संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यन्वयनका जटिलता र संशोधनको आवश्यकता’ सम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनारले..
स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि, कसरी लिने प्यान नम्बर ?
बनेपा, २३ साउन । आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलबाट दुई महीनाको अवधिमा ६ हजार २८३ जनाले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र भ्याट प्रमाणपत्र लिएका छन् । व्यक्तिगत रुपमा पारिश्रमिक आयआर्जन गर्ने तथा व्यावसायिक रुपमा गरिएका अर्थ उपार्जनका गतिविधिहरुको विवरण चुस्तदुरुस्त बनाउनका लागि सरकारले जेठ १५ गतेदेखि प्यान र भ्याट अनिवार्य गरेपछि प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । “सरकारले सो व्यवस्था गरिएपश्चात् विशेषगरी..
सुनको मुल्यले आकाश छोयो, एक सातामै ४ हजार ५ सय बढ्यो
काठमाडौँ, २३ साउन । स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य तोलामा ७० हजार रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । बुधबार प्रतितोलामा १ हजार ५ सय रुपैयाँले मूल्य बढेर ६९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको हो । गत बिहीबार बजारमा एक तोलाको ६५ हजारमा कारोबार भएकोमा एक सातामै ४ हजार ५ सय बढेर बुधबार ६९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । पछिल्लो एक..
कास्की, २२ साउन गण्डकी प्रदेश सरकारले यही साउन २० गते राति बाग्लुङको तमानखोला गाउँपालिका–४ लाममेलामा पहिरोमा परी घाइते भएकालाई राहत प्रदान गरेको छ । पहिरोमा परेर घाइते भई पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका सोही स्थान बस्ने वर्ष ४५ का औमबहादुर, वर्ष १६ का अनिल र वर्ष ९ का राम श्रीपालीलाई सरकारको तर्फबाट आज आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जनही रु..
काभ्रेपलाञ्चोक, २२ साउन पाँचखाल नगरपालिका कार्यालयको जमानीमा स्थानीय खानेपानी उपभोक्तालाई रु दुई करोडको ऋणी बनाइएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पाँचखालका करीब २० प्रतिशत परिवारलाई सहकारीमा ऋणी बनाएर नगरमा सुनकोशी पाँचखाल बृहत खानेपानी परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । पाँचखालका उपभोक्ताले परियोजनाको बैंक खातामा रु १८ हजारका दरले जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ । कूल उपभोक्ता परिवार सङ्ख्यामध्ये करीब एक हजार ४००..
काठमाडौँ, २२ साउन आर्थिक गतिविधिमा संलग्न जो कोही प्यानको दायरामा आउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । प्यान व्यक्तिगत र व्यावसायीक गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । जागिर गर्ने, आफ्नो नामको व्यापार गर्ने, सेयर कारोबार गर्ने लगायतमा व्यक्तिगत प्यान प्रयोग हुन्छ । कुनै कम्पनी दर्ता गर्नुपरेमा व्यवसायीक प्यान प्रयोग हुन्छ । व्यक्तिको नामको प्यानबाट पनि व्यवसाय गर्न मिल्छ । त्यो निजी व्यवसाय हुन्छ । स्थायी..
काठमाडाैं, २२ साउन । निरन्तर रूपमा बढिरहेकाे सुनको मूल्यले बुधबार पनि निरन्तरता पाएको छ। आज सुनकाे मूल्यमा आएकाे वृद्धिसँगै ग्राहकले एक तछाेला सुन किन्न करिब ७० हजार तिर्नुपर्ने भएकाे छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज सुनकाे मूल्य प्रतितोला ६९ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ। यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि मंगलबार प्रतितोला ६८ हजार रुपैयाँ थियो। महासंघका पूर्व अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भर..
काठमाडौँ, २१ साउन खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँले घटेको छ भने नेपाल आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेल र मटितेलको मूल्य बढाएको छ । पेट्रोल लिटरमा १ रुपैयाँ महंगो हुँदा डिजेल र मटितेलको मूल्य ५० पैसा मात्रै बढेको छ । अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १०९ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मटितेलको ९७ रुपैयाँ भएको छ । मूल्य घटेपछि एक..
पोखरा, २१ साउन पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्र्रतिनिधिमण्डल आज अष्ट्रेलियाको अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा गएको छ । सङ्घका अध्यक्ष दामु अधिकारीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण कोइरालाको नेतृत्वको टोलीलाई आज पोखराबाट बिदाइ गर्नुभयो । उक्त टोली यही साउन २२ गते काठमाडौंबाट भदौ १३ गतेसम्म अष्ट्रेलियाको भ्रमणमा रहनेछ । गण्डकी सरकारको आन्तरिक भ्रमण वर्ष, नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचार÷प्रसारका साथै..
काठमाडौं, २१ साउन । मंगलबारबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ काे मौद्रिक नीतिले गरेका केही व्यवस्थाहरु लागु भएका छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि त्यसले गरेकाे व्यवस्थाहरु लागु गर्नकाे लागि राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशिका जारी गरेकाे छ । राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशिका जारी गरेसँगै मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएका छन् । एकीकृत निर्देशिका संशाेधन भएर आएलगत्तै माैद्रिक नीतिमा भएकाे व्यवस्थाहरु आजबाट कार्यान्वयनमा गएका हुन्..
काठमाडौँ, २१ साउन । नेपाली नारीहरुको महान् चाड तिजको मुखैमा बजारमा सुनचाँदीको भाउ आक्रामक बन्दै गएको छ । आक्रामक भाउका कारण सुनचाँदीको बिक्री भने मन्द हुँदै गएको छ । जसका कारण व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । पछिल्लो केही दिनयता सुनको भाउले एकपछि अर्को गर्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ । सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला ६७ हजार ८ सय र तेजावी सुन ६७..
काठमाडौँ, २० साउन प्रदेश नं ३ सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले आफूहरु युवा उद्यमीको लगानी बढाउन लागिपरेको बताउनुभएको छ । मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषद्ले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्न थालिएको ‘युवा उद्यमशीलता सम्मेलन’को जानकारी गराउन आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षण गराउनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र सोचको विकास गराउने बताउनुभयो । सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा..
आज प्रतिताेला १५ सयले बढ्याे सुनकाे मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
काठमाडाैं, २० साउन । आज पनि नेपाली बजारमा सुनकाे मूल्य बढेकाे छ । सुनको भाउ सोमबार एकैदिन तोलामा १५ सय रुपैयाँ बढेको हाे । सुनको भाउ सोमबारका लागि तोलाको ६७ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यो भाउ अहिलेसम्मकै उच्च हो । आइतबार सुन तोलामा ६६ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो । शेयर बजार कमजोर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय..
काठमाडौँ, २० साउन । लेखापरीक्षणमा संसद्को भूमिकालाई लिएर अर्थ मन्त्रालय र संसद्बीच विवाद सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा आइतबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबीच चर्काे बहस नै चल्यो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि समितिले अर्थमन्त्री र सचिवलाई डाकेको थियो। कार्कीले लेखापरीक्षणको प्रक्रियामै लेखा समितिलाई समेट्न सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले यसको..
हेटौँडा, १९ साउन । औद्योगिक नगरका रुपमा विकास भएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा १०० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि उत्पादित वस्तुको निर्यात भने घट्दो क्रममा रहेको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुको भारत तथा तेस्रो मुलुकमा हुने निर्यात व्यापार विगत १० वर्षको तुलनामा हाल ७७ प्रतिशतले कमी आएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा हेटौँडाका चार..
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ईतिहासकै उच्च, यस्तो छ आजको मुल्य !
काठमाडौं, १९ साउन । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघले आईतबारका लागि छापावाल सुनको प्रतितोला मूल्य ६६ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । आईतबारका लागि तेजाबी सुनको प्रतितोला मूल्य नै ६६ हजार पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अनुसार आइतबारका लागि लागि तोकिएको सुनको मूल्य नेपाली सुन बजारको सबै भन्दा उच्च बिन्दु हो । गत शुक्रबार पनि सुनको भाउ ६५..
ललितपुर, १९ साउन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले स्वच्छ कर प्रशासनका माध्यमबाट राजश्व सङ्कलन गरी सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै विकासलाई तीव्रता दिन सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित व्यवस्थापन गोष्ठीमा उहाँले कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने र एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा सुधारको प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले भएका सुधारबाट व्यवसायी तर्सिन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।..
काठमाडौँ, १८ साउन काठमाडौंको थोक बजारको आधारमा हेर्ने हो भने दुई महिनामा तरकारीको मूल्य १५ प्रतिशतले महंगो भएको छ । यो मूल्यबृद्धिले ढाड सेकेपछि उपभोक्ताको आक्रोश हो । वर्षाका कारण उत्पादनै घटेको, ग्रामीण क्षेत्रका सडक बिग्रिदा ढुवानी रोकिएको र किसानले नै उच्च मूल्यमा बिक्री गर्न थालेपछि मूल्य बढेको व्यवसायीको तर्क छ । कालीमाटीकै थोक बजारमा प्रतिकेजी ९८ रुपैयाँ पाइरहेको ठुलो गोलभेडा छेउकै..
Results 1683: You are at page 14 of 57